AKPỌRỤ SITENA MMUỌ NSỌ
Ntọ-ala ọkpụkpọ Ọ bụna sitere na anyi bụ okike Chineke
Ịhe ọbụna madu nwere ike Ị bu sịna-aka Chineke, sonyuazịrị ọkpụkpọ ọbụna, udi ọbụna, ịgba-odibo, udi ndu ọbụna mọbụ nsipu pụlụ iche, manitere na ọkpụkpọ Chineke kpọlu anyi sitena abughị ihe were lue na ịbụ madu nke anyi bu.
Dikana ọkpụkpọ nke echichi Ụkọ-Chukwu, Ụka kwere nke ọma na ezi ọkpụkpọ sina Chineke, mana Ọ ga abu alu ịgbochi yabu ọkpụkpọ
Nke bu eziokwu bu na ọtụtụ ezigbo ụmụ-nwanyi ndi Katolik, na uwa nile, na egosi na akpọlu ha na ọkwa echichi Ụkọ-Chukwu onye nchu aja.
Enwere ọtụtụ osiarị tata sitena ụmụ-nwanyi ndi nwere ọkpụkpọ Ị bụ Ụkọ-Chukwu.
Ọkpụkpọ di otua n’oge gara-age bụ ihe ebidara maka ihi omenala na mmekọlịta na akwụghi-ọtọ. Weluka nkea, anyi nwere ọmumatu ndi Di-Nsọ ndi gosiputara ọkpụkpọ ha:
Catherine nke Siena, Di Asọ, onye nwere nzere kachasi elu na Uka
Theresa nke Lisieux, Di Asọ, onye nwere nzere kachasi elu na Uka na ndi ọzọ ga
Nyocha sitere na ndi ụmụ-nwanyi ịrị-na-iri (100) ndi gosiputara na akpọlu ha na echichi Ụkọ-Chukwu n’imeỤka Katolik gosiri na ha onwe ha tosili etosi, nwee anumoko-nke-obi ma di ekelesu dika ndi nwoke maka echichi Ụkọ-chukwu. Gua Ebea.
Sitena na mkpanite nke ọkpụkpọ nke ụmụ-nwanyi ndi Katolik Chukwu Mmuọ Nsọ na onwe ya na eme ka Ụka nyocha nke ọma mmachi nke Ọ machiri ụmụ-nwanyi.
Ọ bụrụ na Ụka akachie nti na eneghari anya mkpọku nke Mmuọ-Nsọ, ebube pụlụ iche na onyinye nke ụmụ-nwanyi gabu ihe ge efufu-efu na ịgbasa ozi nke Chineke